Abavelisi boMatshini abasarhayo-eTshayina abaThengi boMatshini abaThengayo kunye neFektri
2m-6m umatshini wokuhamba ngesantya esiphezulu
Umatshini wokutswina ngesantya esiphezulu ubalwa ngoomatshini abangafuneki, indlela yokusika, umatshini wokuphelisa umoya, umsebenzi ngamnye wokuqengqeza kunye nolawulo loxinzelelo lokulungisa kunye nesixhobo sokuchonga. Umgaqo wokusebenza unje ngolu hlobo lulandelayo: isixhobo sefilimu esinsimbi ekhutshwe kwistudiyo yokungahambisi ingena kumatshini wokusika ngokusebenzisa i-rollinging roller, i-roller detection roller, eyenza i-roller kunye nenkqubo yokulungisa ukuphambuka. Emva kokuba izinto eziluhlaza zisikiwe, indlela yokubuyela umva iya kubuya ...
Umatshini wokukhwela okhawulezayo ukuze sihlangabezane neemfuno zentengiso, siye saphuhlisa iindawo ezinje ngomgangatho omkhulu. Umatshini wokuhamba ngesantya esiphezulu unokusika iimitha ezi-2 ukuya kwezi-6 izinto ezibanzi, njengeBOPP / CPP / OPP / PET / PE / PVC njalo njalo. Iimpawu zomatshini i-Adopt Motorola i-servo motor kunye nesilawuli eshukumayo se-Nokia ukubonelela ngozinzo kulawulo lwe-tension Optimised, inkqubo esebenzayo kwi-intanethi, kwaye inokunxibelelana kwi-Intanethi yezinto ezilawulwa kude kusekwe kulawulo oluphambili ...
Umatshini wokusika imibhobho
Umatshini wokukhwela okhawulezayo ukuze sihlangabezane neemfuno zentengiso, siye saphuhlisa iindawo ezinje ngomgangatho omkhulu. Umatshini wokuhamba ngesantya esiphezulu unokusika iimitha ezi-2 ukuya kwezi-6 izinto ezibanzi, njengeBOPP / CPP / OPP / PET / PE / PVC njalo njalo. Iimpawu zoomatshini: IAdopt Motorola i-servo motor kunye nesilawuli eshukumayo se-Nokia ukubonelela ngozinzo kulawulo lwesimo esifanelekileyo, inkqubo esebenza ngokusebenzayo kwi-intanethi, kwaye inokunxibelelana kwi-Intanethi yeZinto zolawulo olukude ngokusekwe kwi-contro ephambili ...